🥇 Ukuphendula ngokukhiqizwa kwengubo
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 913
Ukuphendula ngokukhiqizwa kwengubo
Ividiyo yokubalwa kwemali yokukhiqizwa kwezingubo
Oda ukubalwa kwemali ngokukhiqizwa kwengubo
Kuhlelo lwe-accounting lokukhiqizwa kwezingubo kulula ukusebenza nge-Intanethi ngezinhlobonhlobo ezinkulu zezinqolobane neminyango ehlukene, ukulawula nokwenza konke ukunyakaza kwempahla. Kuyinto elula futhi esheshayo ukubala ukukhishwa kweholo lezicucu kubasebenzi bokukhiqizwa kwengubo. Khohlwa ngezibalo ezenziwa ngesandla bese uzizwa ubuhle bohlelo lwe-accounting lokukhiqizwa kwezingubo. Ukubalwa kwezimali ezilinganisweni zamasheya, ukuhambisa amabhidi okuthengwa kwezinto ezithile kanye nezesekeli eziphela ngesikhathi, kanye nokusungula kuba lula kakhulu futhi kusheshe; idatha emafektri igcinwa yi-USU Software. Inqubo yokuhlelwa kokukhiqizwa kwengubo ngosuku lokufaka kanye nokulethwa kwe-oda, ukusika nokuthunga umkhiqizo kuba lula kakhulu. Inqubo yokubala izindwangu, izesekeli nanoma yiziphi izinto ezidingekayo ukwakha umkhiqizo iba lula. Ngaphambilini, bekufanele ubale ngesandla ngasinye isikhundla esidingekayo ukudala umkhiqizo.
Ukusetshenziswa kwe-accounting kokukhiqizwa kwengubo kubala ngokuzenzakalela izindleko yeyunithi eyodwa yokukhiqiza. Kubaphathi, ukuthola izindleko inqubo ebaluleke kakhulu. Uhlelo lwe-accounting lokukhiqizwa kwezingubo luyakwazi ukubala ukulinganiselwa kwezindleko zemikhiqizo eqediwe bese luzimela ngokuzimela izinto ezisetshenziswayo. Uhlelo lwe-accounting lwenziwa ngendlela yangempela, lapho ukujabulela ukusebenza futhi kujabulisa iso. Ukuthumela amadokhumenti ahlukahlukene kumakhasimende nge-imeyili nakho kuba yinto engabizi kakhulu futhi esheshayo. Ungakha uhlelo lokubala lonke loxhumana nabo namakheli wamakhasimende akho nabasebenzi futhi ngemizuzwana uthole idatha kunoma yimuphi uzakwethu. Ikhono lokuthumela imilayezo mayelana nezinguquko ezahlukahlukene enkampanini yakho yokukhiqiza izingubo liyatholakala, izinguquko zekheli noma oxhumana nabo, izaphulelo, ukufika kwemikhiqizo emisha yonyaka. Sebenzisa uhlu lwamakheli ezwi ukwazisa amakhasimende ngolwazi olubalulekile, uku-oda ukulungela, imigomo yokukhokha, kanye nezinye izinto ezibalulekile.
Ukusebenza nobuchwepheshe be-accounting bamuva kwenza idumela lakho lokukhiqiza ingubo njenge-salon esezingeni eliphezulu futhi yesimanje. Usebenzisa uhlelo lwethu lwe-accounting lokukhiqizwa kwezingubo, ungahlanganisa umsebenzi weminyango yakho njengomshini owodwa. Ukwakha igalari ngemisebenzi yakho eqediwe, udinga kuphela ukuthatha isithombe usebenzisa ikhamera yewebhu; ibuye iboniswe ngesikhathi sokuthengisa.
Ibhizinisi lokukhiqiza izingubo lidlala indima ebalulekile emhlabeni wanamuhla. Sichitha isikhathi esiningi sizama ukukhetha isembatho esihle kunazo zonke ukuze sikwazi ukulingana nomphakathi nezimo, okusho ukuthi iyiphi ingubo okufanele isetshenziswe. Ngenxa yalokhu, kunezinkampani eziningi ezincintisana kulo mkhakha wemakethe futhi zizama ukwenza isiqiniseko sokuthi inkampani yazo iyezwakala futhi iyaziswa. Kodwa-ke, lokhu akulula kangako emncintiswaneni onjalo onzima. Ukuze ukwazi ukusebenza ngempumelelo ngezikhangiso nokumaketha, kuyadingeka ukusungula ukulawula okuphelele kuzinqubo zangaphakathi zenhlangano. Kubalulekile ukwenza isiqiniseko, ukuthi konke kwenzeka ngokohlelo oluhleliwe nokuthi konke kusebenza ngokohlelo. Ukuphela kwendlela enenzuzo yokuphuma ukwethulwa kwe-automation. Uhlelo oluhle kakhulu lwe-accounting lokukhiqiza ingubo, njengoba sesishilo, uhlelo lwe-USU-Soft. Kuthuthukiswa abahleli abahle kakhulu abanolwazi oluningi nolwazi emkhakheni wezinhlelo.
Ngokuzenzekelayo, awudingi ukunaka ngokuqinile ekuphathweni kwabasebenzi, izindlela zezimali, ingubo njalonjalo, njengoba ilawulwa uhlelo lwe-accounting lokukhiqizwa kwezingubo. Konke okudingeka ukwenze ukuhlaziya imibiko elungiselelwe isoftware yokubala kunoma yisiphi isici osidingayo. Kodwa-ke, kuyadingeka ukuthi kuqinisekiswe ukuthi bonke abasebenzi bafaka imininingwane eyiyo kuhlelo ngesikhathi esifanele. Ngaphandle akunakwenzeka ukukhuluma ngokubaluleka kwedatha efakiwe. Uhlelo lwezimali zokukhiqiza luphethe nezinqolobane zakho. Uma kunezinto ezithile esezizophela, uhlelo lwe-accounting lukwazisa ngesidingo sokwenza i-oda futhi likuthumele isaziso. Ukuphela kwento eshiyelwe isisebenzi esibhekele ukuthinta umphakeli noku-oda izinto ezidingekayo ukuqinisekisa ukuthi inqubo yokukhiqiza ingubo ayiphazamiseki. Njengoba sazi, kubaluleke kakhulu. Amahora ambalwa kuphela esikhathi sokuphumula angasho ukulahleka okukhulu.
Njengoba ukwazi ukubona kule ndatshana, i-USU-Soft empeleni inezinketho eziningi ezingakusiza ukuqhuba noma yiliphi ibhizinisi ngempumelelo. Sikumema ukuba ubonisane nge-Skype nochwepheshe be-USU-Soft, lapho ungabuza khona imibuzo yakho, ukhethe ukucushwa okuhle kakhulu kwenkampani yakho, futhi uthole nethuba lokulanda inguqulo yamahhala yesoftware engahlolwa ku inkampani.
Njengoba sonke sazi, umholi olungile uhlale azi ukuthi kwenzekani enhlanganweni yakhe. Kubukeka kungenanzuzo ukuqasha abasebenzi abengeziwe abazolawula abanye nazo zonke izinqubo. Kungcono kakhulu ukukhetha umsizi we-automation okwazi konke nokuqapha yonke into ngaphandle kokuphumula. Lokhu yilokho ubuchwepheshe besimanje obunikeza ukusebenzisa. Ngakho-ke, kungani wenqaba indlela ethuthuke kangaka yokuqapha ibhizinisi lakho? Uhlelo lwe-USU-Soft accounting lusiza ezicini eziningi. Okungukuthi, imali yakho iyabalwa futhi kwenziwa imibiko ekhethekile. Ngaphezu kwalokho, wazi konke ngokukhangisa futhi ungathuthela kwenye indawo usizo lwezezimali kuziteshi ezisebenza ngempela zesikhangiso. Ngale ndlela uheha amakhasimende akho usebenzisa isu eliphumelela kakhulu. Esikunikezayo kuyithuluzi kuphela. Yisebenzise ngokuhlakanipha futhi ube ngaphambi kwabancintisana nabo! Sifuna ukwenza inhlangano yakho ibengcono ngezindlela zokwethula ubuchwepheshe obusha ngaphandle kwabo okungenakwenzeka ukuhlala busemakethe kulezi zinsuku.